ENTERTAINMENT3- Nepal news headlines | breaking news kathmandu | national news of nepal live
गान्धीको जन्मदिनमा ऋतिक–टाइगरको ‘वार’
बलिउडका दुइ चर्चित एक्सन हिरोहरु यही अक्टोबर २ तारिखका दिन सिनेमा घरमा वार (युद्ध)गर्नेछन् । गान्धीको जन्मदिनको दिन ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफ अभिनित बहुप्रतीक्षित चलचित्र ‘वार’ प्रदर्शन हुँदैछ । ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफको जोडी पहिलो पटक यो चलचित्रमा देखिदैछन् । वारलाइ बलिउडको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो एक्सन फिल्म दाबी गरिएको छ । वारमा ऋतिक र टाइगर खतरनाक जंग लडेका छन् ।
हलिउडका चार द्धन्द निर्देशकको कोरियोग्राफी
चलचित्रमा हलिउड स्टाइलका एक्सन दृश्यहरु देख्न सकिनेछ । विश्वका विभिन्न ७ मुलुकमा छायाँकन गरिएको सिनेमामा हलिउडका ४ दिग्गज द्धन्द निर्देशकले एक्सन सिनकालागि कोरियोग्राफी गरेको बताइएको छ । हलिउडको जस्तो एक्सन सिनकालागि भर्खरै बाहुबली अभिनेता प्रभासको साहो पनि निकै चर्चामा रहेको थियो ।
ऋतिक र टाइगरको कनेन्सन
ऋतिक बलिउडमा उत्कृष्ट नृत्य, द्धन्द दृश्यकालागि चर्चित छन् भने विश्वका हयान्डसम हिरोहरुको सुचीमा पनि गनिन्छन् । ऋतिक पछि नृत्य र द्धन्द दृश्यकालागि चर्चामा आएका पछिल्लो पुस्ताका अभिनेतामा टाइगर पर्छन । ऋतिक मार्शल आर्टस र ताइक्वान्दो प्रशिक्षित छन भने १४ वर्षको उमेरदेखि मार्शल आर्टस र ताइक्वान्दो सिकेका टाइगर ब्लयाक बेल्ट बिजेता हुन । ऋतिकको फ्यान मात्र नभएर उनीबाट प्रभावित भएर टाइगरले नृत्य सिकेको बताउँदै आएका छन् ।
निर्माण र निर्देशन
यशराज फिल्मको ब्यानरमा निर्माण भएको वारलाइ सिद्धार्थ आनन्दले निर्देशन गरेका छन् । फिल्मलाइ भारतको सेन्सर बोर्डले प्रदर्शनकालागि अनुमति दिइसकेको छ । बोर्डले बिना कुनै सेन्सर २ घंटा३५ मिनेट अवधिको फिल्मकालागि अनुमति दिएको छ । ऋतिक र टाइगरका अलावा सिनेमामा वाणी कपुरले मुख्य भुमिकामा काम गरेकी छन् ।
३० करोड बजेटको ‘ड्रिम गर्ल’ले दुइ दिनमै कमायो २५ करोड
यही शुक्रबार प्रदर्शनमा आएको आयुष्मान खुराना र नुसरत भरुचा अभिनित ‘ड्रिम गर्ल’ले दुइ दिनमा २५ करोड ५० लाखको कमाइ गरेको छ । कमेडी ड्रामा यो फिल्मले पहिलो दिनमा साढे नौ करोड र दोश्रो दिनमा १६ करोड ४२ लाख कमाइ गरेको फिल्म समीक्षक तरण आर्दशले बताएका छन् । ३० करोडको बजेटको यो फिल्मले दुइ दिनमा नै २५ करोड बढिको कमाइ गरेको देखेर यसले तीन दिन भित्र लागत उठाउन सफल हुने आंकलन गरिएको छ ।
भारतीले कपिलकी श्रीमतीको प्रशंसा गर्दै भनिन, ‘गिन्नी एक अदभूत मान्छे’
आयुष्मान खुराना साना बजेटको फिल्मबाट राम्रो कमाइ गर्ने अभिनेतामा पर्छन । गत वर्ष प्रदर्शन भएको उनको तीन वटा फिल्मले सफलताको झण्डा गाडेको थियो । बधाई हो, अन्धाधुन्द र आर्टिकल१५ जस्ता उत्कृष्ट फिल्मले आयुष्मानलाइ हिट फिल्म दिन सक्ने कलाकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । अन्धाधुन्दले भारको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समेत जितेको थियो । बालाजी मोसन पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाइ राज शान्डिल्याले निर्देशन गरेका हुन । फिल्ममा युवतीको भुमिका गरेका आयुष्मानले दर्शककालागि नयाँ स्वाद पस्केका छन् ।
चर्चित कमेडियन भारतीले कपिल शर्माकी पत्नी गिन्नी चतरथको प्रशंसा गरेकी छन् । भारतीय संचारमाध्यममा दिएको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले गिन्नीका स्वभावका बारे बताउँदै गिन्नी एक अदभुत मान्छे रहेको भन्दै प्रशंसा गरिन। सोका कलाकारहरु कपिलको घरमा रिहर्सलकालागि गएका बेला गिन्नी आफैले उनीहरुलाइ खाना पस्किन्छिन् हुनत कपिलको घरमा ३ वटा कुक भएपनि गिन्नीले व्यक्तिगत रुपमा सारा कामको निगरानी आफैले गर्छिन र आवश्यक्ता अनुसार कुकलाइ निर्देशनस पनि दिन्छिन् । भारतीले गर्भवती अवस्थामा समेत गिन्नीले घंटौ उभिएर कलाकारहरुको ध्यान राख्ने गरेको भारतीले बताइन्। उनले कपिललाइ भाइ भनेर सम्बोधित गर्दै भनिन्, ‘कपिल भैया उत्कृष्ट छन् । हरेक मान्छे खराब समयबाट गुज्रिन्छ । तर मलाइ खुशी छ कि उनी बलियो भएर फर्किएका छन्।’
कपिल र गिन्नी चाँडै नै आमाबाबु बन्दैछन् । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा कपिलले भनेका थिए कि यो समय उनी सँगसँगै पुरै परिवारकोलागि निकै विशेष र भावनात्मक रहेको छ । उनले भनेका थिए,‘मेरो पुरा परिवार हाम्रो बच्चालाइ स्वागत गर्नकालागि उत्सुक छ । हामी यति उत्साहित छौं मैले र गिन्नीले आफ्नो बच्चाकोलागि स–साना सामान खरीद पनि गर्न थालिसक्यौं ।’
सन्नी लियोनी पासवर्डको प्रिमियरकालागि काठमाडौंमा
बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी बिहिबार काठमाडौ पुगेकी छन् । नेपाली चलचित्र ‘पासवर्ड’को प्रिमियरकालागि उनी काठमाडौ आएकी हुन् । फिल्ममा सन्नीकाे एउटा ‘आइटम डान्स’ रहेको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा विश्व मै सबैभन्दा मनपर्ने स्थान नेपाल रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘नेपालमा समय बिताउन पाउँदा आफूलाइ निकै भाग्यमानी ठान्छु ।’
उनले काठमाडौ पुग्नु अघि विहिबार एउटा टि्विट समेत गरेकी थिइन् ।
I couldnt have asked forabetter morning in Kathmandu.
We were all lucky enough to make to morning prayers. Something very soothing hearing chanting and drums!
Today I pray for strength and my family members to have strength to see the great things in life. pic.twitter.com/7vWfzNS4Kb
— Sunny Leone (@SunnyLeone) September 13, 2019
‘मिशन मंगल ’ र विद्याको दमदार कमब्याक
उत्कृष्ट अभिनेत्रीकालागि राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित बलिउड नायिका विद्या बालनले दमदार कमब्याक गरेकी छिन् । दुइ साता अघि रिलिज भएको चलचित्र ‘मिसन मंगल’मा गरेको अभिनयबाट उनले चोतर्फी प्रशंसा बटुलेकी छिन् । अक्षय कुमारसँग स्क्रिन साझा गरेकी विद्याको यो चलचित्र २०० करोडको क्लबमा सामेल भइसकेको छ । यसमा तारा सिन्दे पात्रको भुमिकामा उनले अभिनय गरेकी थिइन । अक्षयको भुमिका जत्तिकै दमदार भुमिका विद्याको रहेको छ । चलचित्रको सफलताले आफ्नो आत्मविश्वास बढेको विद्याले बताएकी छिन् ।
विद्याको दुइ वर्षअघि तुम्हारी सुलु प्रदर्शन भएको थियो । यसमा उनले मध्यमवर्गीय परिवारकी महिलाको जकी बन्ने सपनाको यात्रामा अभिनय गरेकी थिइन । चलचित्रमा उनको अभिनयको प्रशंसा भएको थियो । सेक्सी हुनकालागि छोटा कपडा र लामो गोडा हुनु पर्छ भन्ने विद्या मान्दिनन् । आफ्ना चलचित्रहरुले यो प्रमाणित गरेको उनको विश्वास छ । चलचित्र क्षेत्रमा नआएको भए मनोचिकित्सक बन्ने विद्या बताउँछिन् ।
‘भारतीय जेलमा रहेका नेपाली कैदीहरुको तथ्याँक सार्वजानिक’,विभिन्न राज्यका जेलमा ६१२ नेपाली कैदीहरु
विद्या अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर समस्याबाट पिडित छिन् । जसले गर्दा उनलाइ सामान्य व्यक्तिहरुले गर्ने भन्दा अति सरसफाइ गर्नु पर्ने समस्या रहेकाे छ । यहाँसम्म कि उनी घरमा अलिकति धुलो पनि देख्न सक्दिन, पत्रपत्रिका निर्धारित स्थानमै राख्नुपर्ने लगायत सुटिंगका समयमा भेनिटि भ्यान समेत सफा गर्न थाल्छिन् ।
‘विफलता नै नयाँ शुरुवातको आधार,’ चन्द्रयानमा अमिताभको प्रतिक्रिया
एनआईबिस संवाददाता,नयाँ दिल्ली
‘विफलता नै नयाँ शुरुवातको आधार हुन्छ,’ मिशन चन्द्रयान२ बारे प्रतिक्रिया दिदैं अमिताभ बच्चनले टिविट गरेका छन् । चन्द्रमाको सतह भन्दा २.१ किलोमिटरको उचाईमा सम्पर्क टुटेको बारे बच्चनले टिविट गर्दै आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘चन्द्रमा ३८४४०० किलोमिटको उचाईमा छ र हामी केबल २.१ किलोमिटरमा असफल भयौं, जसको अन्तर ०.०००५४६३ प्रतिशत हुन्छ । यद्यपि यो विफलता नै नयाँ शुरुवातको एउटा आधार हो, यो असफलतामा पनि सफलताको स्वाद पाइएको छ , हाम्रा वैज्ञानिकहरु र इसरोलाइ धन्यवाद,’ बच्चनले टिविटमा लेखेका छन्
यसअघि अनुपम खेर, स्वरा भास्कर, शाहरुख खान,अदनान सामी लगायत बलिउडका कैयो कलाकारहरुले इसरोका वैज्ञानिकहरुको प्रशंसा गरेर हौसला बढाउँदै टिविट गरेका छन् ।
चन्द्रयान २ को विक्रम ल्याण्डरको सम्पर्क टुटेर मिशन पूर्ण हुन पाएन । इसरोका अनुसार चन्द्रयान२ को तीन भाग मध्ये विक्रम र प्रज्ञान रोवर क्षतिग्रस्त भएको छ । यो चन्द्रयान२को ५ प्रतिशत हिस्सा मात्र हो । बाँकी ९५ प्रतिशत आर्बिटरले चन्द्रमाको सफलतापूर्वक चक्कर काटिरहेको इसरोले जनाएको छ । मिशनको लागत ९७८करोड रहेको छ ।
‘साहो’ले कमायो २०० करोड
समीक्षकको नजरमा खरो उत्रेन तर कमाइमा अब्बल ‘साहो’
चलचित्र समीक्षकको नजरमा खरो उत्रन नसकेपनि कमाइको मामिलामा प्रभास र श्रद्धा कपुर अभिनित ‘साहो’ले बाक्स अफिसमा धुम मचाइरहेको छ । २४ करोड रुपैंयाको शानदार ओपनिंग गरेको साहोले तेश्रो दिन अर्थात आइतबार सम्म २०० करोडको कमाइ गरिसकेको छ । हिन्दि, तमिल र तेलगु भाषामा रिलिज गरिएको चलचित्रको हिन्दी भर्जनले गरेको कमाइ मात्र ८० करोड पुगेको छ । साहो साउथमा निर्माण गरेर हिन्दी चलचित्र बजारमा रिलिज भएको तेश्रो सबैभन्दा बढि कमाउने चलचित्र बनेको छ । यसअघि प्रभासको बाहुबली(दुबै भाग) ले धुम मचाइसकेको छ ।
एक्सन थ्रिलर चलचित्र साहोमा प्रभासले हलिउड स्टाइलमा द्धन्द दृश्य दिएका छन् । उनको र श्रद्धाको जोडीलाइ पनि दर्शकहरुले खुब रुचाएका छन् ।समीक्षकलाइ निराश बनाएको चलचित्रको एक्सनले भने दर्शकलाइ आकर्षित गरिरहेको छ । कथावस्तुबाट समीक्षकलाइ निराश बनाएको भएपनि चलचित्रको व्यापारमा कुनै कमी आएको छैन् । ३५० करोडको लगानीमा निर्माण गरिएको चलचित्रलाइ कतिपयले लगानीको सत्यानाश भनेर समेत टिप्पणी गरेका थिए ।
सलमान–आलियाको ‘इन्शाल्लाह’ नबन्ने
भंसालीको ‘इन्शाल्लाह’ किन रोकियो ?
निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली र सलमान खान–आलिया भट्ट अभिनित चलचित्र ‘इन्शाल्लाह’ हाललाइ नबन्ने भएको छ । यो चलचित्रबाट सलमान खानले हात झिकेका छन् । जसका कारण यो फिल्मको निर्माण अनिश्चितकालकालागि बन्द भएको छ । भंसालीको प्रोडक्सन हाउसले सलमान आलिया अभिनित इन्शाल्लाहको निर्माण अनिश्चितकालकालागि स्थगित गरेको पुष्टि गरेको छ ।
भंसाली र सलमानका बीच चलचित्रका विषयमा रचनात्मक मतभेद(क्रियटिभ डिफरेन्सेज) भएका कारण सलमानले हात झिकेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले बताएका छन् । यद्यपि सलमानले चलचित्रमा आफू नभएपनि भंसालीले यो फिल्म निर्माण गरुन भन्ने चाहेको र आफूहरु दुबै असल मित्र रहिरहने बताए । भंसालीले आफ्नो चलचित्रसँग कहिल्यै पनि धोखा नगर्ने दाबी गर्दै भारतीय संचारमाध्यममा सलमानले भने , ‘खामोशीमा काम गर्न शुरु गर्नु अघिदेखि नै संजय मेरा मित्र हुन् । उनी मनिषा कोइराला मार्फत मकहाँ आएका थिए । त्यसपछि हामीले हम दिल दे चुके सनममा संगै काम गरयौं । मलाइ यो फिल्मको कथावस्तु मन परयो अनि हामीले संगै काम गर्ने निर्णय गरयौं ।’
उनले थप्दै भने , संजयले आफ्नो चलचित्रसँग कहिल्यै गद्दारी गर्ने छैनन यति कुरा म भन्न सक्छु । त्यसैले म चाहन्छु संजयले जसरी बनाउन चाहेका छन् त्यसरी नै यो चलचित्र बनाउन । हामीबीच केहि पनि परिवर्तन भएको छैन् र मलाइ विश्वास छ संजयको मनमा पनि मेरोलागि कुनै परिवर्तित भाव छैन । म उनको आमा लीला र बहिनी बेलासँग निकै नजीक छु । मेरो तर्फबाट उनलाइ शुभकामना । हामी भविष्यमा एक साथ कुनै फिल्ममा काम गर्न सक्छौं , इन्शाल्लाह भन्दै उनले आफनो टुग्याएका छन् ।
शुटिंग फ्लोरमा जानु एकदिन अघि बन्द भयो चलचित्र
शुटिंग फ्लोरमा जानु एकदिन अघि यो फिल्म बन्द गरिएको छ । भारतीय संचारमाध्यमले श्रोतको हवाला दिदै लेखे अनुसार सलमान फिल्मको पहिरनमा परिवर्तन गर्न चाहन्थे । उनी फिल्मको पहिलो एक घण्टाको कथावस्तुमा खुशी थिए तर अन्त्यमा उनको आपत्ति थियो । उनले भंसालीलाइ बाँकी कथावस्तुलाइ परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका थिए । यहाँ सम्म कि प्रोेडक्सन टीमले पहिलो दिनको शुटिंगको समय निर्धारित गरिसक्दा सम्म पनि भंसारी र सलमान कथावस्तुमा एकमत हुन सकेनन् । भंसाली यसलाइ प्रेमकथाको रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्थे भने आगामी ईदको अवसरमा रिलिज गर्ने तय गरिएको फिल्ममा प्रेमकथा एउटा भाग हुनुपर्ने सलमानको भनाइ थियो । भंसालीले आफ्ना अभिनेतालाइ सम्मान गर्छन र उनीहरुको सुझावलाइ स्वागत पनि गर्छन तर उनको कथाको विषयबस्तु नै परिवर्तन गर्ने कुरामा सहमत हुँदैनन् त्यसैले उनले यो फिल्मको निर्माण नै रोक्ने निर्णय गरेका हुन् ।
भंसाली अर्को चलचित्र तर्फ केन्द्रित
सलमानको विकल्प खोज्नु भन्दा उनको अर्को रोमान्टिक फिल्म इजहारको निर्माण तर्फ भंसालीले ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने संचारमाध्यमहरुले लेखेका छन् । यो फिल्मकालागि शाहरुख खानसँग कुराकानी भइरहेको छ । आगामी इद सम्ममा यो चलचित्र आउन नसक्ने भएको छ । बुधबारदेखि ‘इन्शाल्लाह’ फ्लोरमा जाने थियो । फिल्मका सेटहरु पनि तयार भइसकेका थिए । सलमान र भंसालीले गोप्य कुराकानी गरेर फिल्मलाइ अगाडि बढाउन नसकिने निर्णय गरेको संचारमाध्यमले लेखेका छन् ।
ईदमा सलमानको ‘किक२’ रिलिज हुन सक्ने
‘इन्शाल्लाह’२०२०को ईदमा रिलिज गर्ने घोषणा गरिएको थियो तर यसको निर्माण बन्द भएपछि सलमानले आगामी ईदमा उनको किक चलचित्रको दोश्रो भाग रिलिज गर्न सक्ने संकेत दिएका छन् । ‘इतना मत सोचना मेरे बारेमे,दिल मे आता हुँ,ईद पे भि’ किक चलचित्रको हिट डायलग नै लेखेर उनले संकेत दिएका छन् । इन्शाल्लाहको एउटा पोस्टर समेत आइसकेको थियो । सलमानले प्रत्येक वर्ष ईदमा एउटा चलचित्र रिलिज गर्ने रेकर्ड कायम राख्दै आएका छन् ।
सरकारद्वारा अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह
संविधान दोश्रो संसोधन विधेयक राष्ट्रपतिद्धारा प्रमाणिकरण,नयाँ नक्सा निशान छापमा प्रकाशित गर्ने बाटो खुल्यो
‘युद्ध अपराध हो,युद्ध रोक, शान्तिको प्रवर्द्धन गर’
राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन विधेयक पारित